I-china abakhiqizi nabaphakeli abasezingeni eliphakeme lasechina High Quality Shock-Z11069 nabaphakeli | TANGRUI
Okokushayela kwansuku zonke nokusindayo emgwaqeni ngokufanayo, ama-shock absorbers agcina iJeep yakho isebenza kahle futhi ivikela ukumiswa kwayo. Noma ngabe udinga ukufaka okunye esikhundleni, ukukhuphula izinga noma ukulungiswa ngokuphelele, iTangrui inikezela ngothuko olufanele cishe noma yimuphi unyaka kanye nemodeli yeJeep emakethe.
Okuthengiswa Kakhulu Kuphela Lapha
Njengo jeeper, uyazi ukuthi ubunjiniyela bekhwalithi babala ukuhamba okuhle kakhulu, futhi nathi siyakwenza. Ukufakwa esikhundleni kwethu njengengxenye yokushaqeka kuvela kubakhiqizi abaphezulu abavela ku-Pro Comp Suspension naseRubicon Express kuya kuDaystar naseBilstein, konke kuhlolwe futhi kwafakazelwa ukuthi ilungele i-rig yakho. Amamodeli we-Twin, monotube, kanye namachibi echibini konke kuyatholakala kunoma yini oyenzayo. Kuma-rigs asemigwaqweni esezingeni eliphakeme, sikumboze ngokwethuka okulungiselelwe ukumiswa okuphakanyisiwe kanye nezinsimbi zokuphakamisa ukuthuthukiswa kwe-DIY.
Izingxenye nokumiswa okuhle kakhulu akusho lukhulu uma zingalingani i-rig yakho, kepha kwaTangrui siyaqinisekisa ukuthi uthola umdlalo ofanele. Ikhathalogi yethu eku-inthanethi, ehlala isesikhathini samasheya ethu agcwele online nasendaweni, ifana nemodeli yemoto yakho ukuqondisa ukulingana futhi ikunikeza lonke ulwazi oludingayo ukuqhathanisa, ukuthenga nokufaka.
Sizibophezele Kumakhasimende Wethu
Siziqhenya hhayi ngemikhiqizo yethu esezingeni eliphakeme kuphela kodwa nangesevisi esezingeni eliphezulu esiyihlinzeka kumakhasimende. Ngaphandle kwengcebo yolwazi online, ithimba lethu lochwepheshe lithatha noma imiphi imibuzo onayo ukuze ukwazi ukuthatha isinqumo unolwazi lokuthi uthengani. Ngaphezu kwalokho, wonke umkhiqizo othengiswa kuTangrui usekelwa yisiqinisekiso semali yezinsuku ezingama-90. Uma oncintisana naye athengisa oku-odile ngemali engaphansi kwalokhu okukhokhile, sazise ngokubuyiselwa kwemali ngomehluko wentengo. Ngezingxenye ze-premium, ochwepheshe abazinikele kanye namanani angenakuhlulwa, thenga nathi ngokuqiniseka okugcwele ukuthi iJeep yakho isezandleni ezinhle.
Ngokushintshwa kwesixhumi sokushaqisa, imoto yakho izosebenza kangcono kunakuqala futhi uzozizwa umehluko ngokushesha lapho ushayisa umgwaqo. Uzobona ukuzinza okuthuthukile lapho ushayela emigwaqeni enodaka, ukuphatha kangcono lapho uhambisa imifudlana engajulile nokunethezeka okuhle lapho uhamba phezu kwezindlela ezingalingani. Ukuhamba okulawulwa kakhudlwana okugcina amathayi akho ethinta phansi ngaphansi kwakho ukuze uxhumane ngokuqhubekayo, udinga ukushaqeka kweJeep ukufaka esikhundleni sakho esidala, esigugile bese ekubuyisela esimweni sokushayela. Ngokukhethwa kwethu kweminyango emibili neminyango emine etholakala njengabantu ngabodwana noma ngababili ngokuya ngohlobo lomkhiqizo, uzoba nokuhamba okulawuleka kakhudlwana ngokusebenza kangcono ngalezi zidonsa eziqinile, ezihlala isikhathi eside.
Uma ufuna okokuthusa amaJeeps noma amaloli, lapho-ke uze endaweni efanele. Sinikeza ukukhetha kusuka kumikhiqizo ehamba phambili embonini nangamanani angenakuhlulwa. Izintengo zethu zansuku zonke eziphansi kanye nesiqinisekiso sokufaniswa kwentengo esingu-100% kuqinisekisa ukuthi wonga kakhulu uma uthenga ukuthuthukisa noma ukuguqula imoto yakho. Thenga iqoqo lethu namuhla ukusizakala ngalezi zintengo ezimangalisayo futhi ugqokise iJeep yakho, iloli noma i-SUV ngemishini oyidingayo ukuze isebenze kahle.
Akukho lutho olufana nokujaha imigwaqo nokuzizwa uphethe lapho uya khona. Kepha izinkinga zingavela lapho imoto yakho ikhala-shi lapho ubhuleka noma udlidliza ngaphansi kwakho. Uma kunjalo, kusho ukuthi sekuyisikhathi sokufaka esikhundleni sesitholi sokushaqeka futhi sikubuyisele ekulawulweni emgwaqweni. Lapha eTangrui, sinokhetho olukhulu lwezinciphisi ezishaqisayo ezivela kumikhiqizo ehamba phambili embonini efana nePro Comp Suspension, iKing Shocks neSkyjacker ukukhetha okokumosha okweqile kwemoto yakho ongekho emgwaqeni noma umshayeli wakho wansuku zonke.
Umkhiqizo OkweMitsubishi, iLancer
Langaphambilini ITangRui Spring Shock Absorber-Z11068
Olandelayo: I-28313SC010 ne-28313SC011 STEERING KNUCKLES Ye-Subaru -Z1253
Isifaki seHood Shock
I-Bolt Shock Absorber
I-Rubber ye-Shock Absorber
I-6L8Z-30-78AA ne-YL823078AA Yokulawula Izikhali Ze-K ...
I-China Oem Shock Absorber Ye-AUDI A4-Z11059
I-Model Model Shock Absorber-Z11055
High Quality Steering Knuckle Ukuze Volkswagen Be ...
Ikhwalithi ephezulu Emuva Kwesokunxele Ukumiswa Ukulungisa Kit Ca ...
I-Rubber ye-Shock Absorber, Isifaki seHood Shock, Ihabhu Lesondo, ITire Ball Joint, I-Bolt Shock Absorber, Iqhubu langaphambili Lokuqondisa,